Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ 76391 Hogwarts Icons ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ပြခန်း
15 / 08 / 2021 01 / 09 / 2021 Dimitri 480 Views စာ 1 မှတ်ချက် ၇၆၃၈၆ Hogwarts ရဲတိုက်, ၇၅၉၇၉ Hedwig, ၇၆၃၈၆ Hogwarts Icons စုဆောင်းသူများ၏ထုတ်ဝေမှု, ဟယ်ရီပေါ်တာ, ဟယ်ရီပေါ်တာ ၂၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်, Hedwig, Hermione granger, Lego, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Lego စတိုး, Lego စတိုးဆိုင်များ, LEGO.com, သခင် Voldemort, ပါမောက္ခ Dumbledore, ပါမောက္ခ McGonagall, ပါမောက္ခ Snape, reviews, Ron Weasley, Rubeus Hagrid, အဆိုပါ LEGO Group, Wizarding ကမ္ဘာ့ဖလား, Wizarding Harry Potter ၏ကမ္ဘာ
Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ ၇၆၃၈၆ Hogwarts Icons စုဆောင်းသူများ၏ထုတ်ဝေမှု ၎င်းသည်ပရိသတ်များအားလုံးလုံးလျားလျားလွဲမှားစေမည့်တကယ့်မှော် Wizarding World အတွေ့အကြုံဖြစ်သည်။
အဲဒါ ၁၁ နှစ်ရှိပါပြီ Lego ပရိသတ်များကို Wizarding World of နှင့်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည် ဟယ်ရီပေါ်တာ (အစောပိုင်းဝတ်စုံများသည် ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင်အသားအရောင် minifigures ကိုပထမဆုံးမိတ်ဆက်သောသူများထဲတွင်) နှင့် Lego အဖွဲ့သည်ဤနွေရာသီအတွက်သမိုင်းမှတ်တိုင်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်အထူးအနှစ် ၂၀ ပြည့်နှစ်ပတ်လည်အတွဲများကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ အချို့ကထူးချွန်ခဲ့သော်လည်း ၇၆၃၉၁ Hogw ၏စင်ကြယ်သောစကေး၊ ရည်မှန်းချက်နှင့်စင်ကြယ်သောပန်ကာ ၀ န်ဆောင်မှုသို့မည်သူမျှမနီးစပ်ခဲ့ပါ။arts Icons စုဆောင်းသူများ၏ထုတ်ဝေမှု
စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သော franchise ၏ပရိတ်သတ်များအတွက်အိပ်မက်တစ်ခုကိုစိတ်ကူးရလျှင်ဤအစုသည်အရာအားလုံးမှအထင်ကရအုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောပုံတူများကိုပေးသည် ဟယ်ရီပေါ်တာTom Riddle ၏ဒိုင်ယာရီသို့နာမည်ကျော်မျက်မှန်ဝိုင်းများ၊ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောဆေးရည်ပုလင်းများ၊ တုတ်များ၊ အိမ်သုံးစောင်များနှင့်အရာအားလုံးကိုပိတ်ပစ်ရန်သေးငယ်သည်ထက်သာလွန်သော Hedwig ၏အံ့မခန်းလှပသောတင်ဆက်မှု ၇၅၉၇၉ Hedwig ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဖြန့်ချိခဲ့သည်။
စက္ကူပေါ်တွင်ဤကဲ့သို့သောဘဝပုံစံများသည်လူတိုင်းကိုမဆွဲဆောင်နိုင်ပေ၊ 76391 Hogw အကြောင်းစွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသောအရာတစ်ခုရှိသည်။arts Icons Collector's Edition ၏အနှစ်သက်ဆုံးပင်ဖြစ်သည် Lego ပရိသတ်များသည်၎င်း၏စာလုံးပေါင်းအောက်၌ကျမည်မှာသေချာသည်။
theme: ဟယ်ရီပေါ်တာ အမည်သတ်မှတ်မည် - ၇၆၃၈၆ Hogwarts Icons စုဆောင်းသူများ၏ထုတ်ဝေမှု ဖြန့်ချိ: စက်တင်ဘာလ 2, 2021
စျေးနှုန်း: £ 229.99 / $ 249.99 / € 249.99 အပိုင်းပိုင်း: 3,010 အသေးစားပုံများ: 3
Lego: စက်တင်ဘာလ 2, 2021
အစုံနဲ့မတူ၊ ၇၆၃၈၆ Hogwarts Icons စုဆောင်းသူများ၏ထုတ်ဝေမှု ကြီးမားသောပုံစံတစ်ခုမဟုတ်သော်လည်းနေရာအနှံ့မှအထင်ကရနှင့်ချက်ချင်းမှတ်မိနိုင်သောမှော်လက်နက်များစုစည်းရာဖြစ်သည် ဟယ်ရီပေါ်တာ franchise: Harry ၏မျက်မှန်နှင့်ကြိမ်လုံး၊ ချောကလက်ဖား၊ Tom Riddle ၏ဒိုင်ယာရီ၊ မှော်ဆေးရည်ပုလင်းများ၊ စာလုံးပေါင်းစာအုပ်များ၊ Felix Felicis (သို့မဟုတ် 'ကံကောင်းခြင်းအရည်')၊ Golden Snitch, Hogwarts house scarf၊ အလွန်တိကျပြီးစွဲမက်ဖွယ် Hedwig နှင့်ပုံနှိပ်ထားသော Hogwarts လက်ခံမှုစာ (၈ × ၁၆ ပုံနှိပ်ထားသောကြွေပြားသုံးလုံးဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်)
တစ်ခုအတွက်ရှားပါတယ် Lego ၎င်း၏အရင်းအမြစ်ပစ္စည်း၏အနှစ်သာရကိုစုံလင်စွာဖမ်းယူရန်သတ်မှတ်ထားသည်၊ သို့သော်တည်ဆောက်မှုအဆင့်တိုင်းသည်နောက်ဆုံးကဲ့သို့စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသည်ဟုခံစားရသည်။ မင်းကအစုံအလင်အားဖြင့်မင်းရဲ့လမ်းကိုလျှောက်နေရင်းမှော်ဆန်ဆန်ဖန်တီးနေတာကိုတကယ့်ကိုခံစားရတယ်၊ အရာဝတ္ထုတစ်ခုစီက Hogw ခန်းမကနေတည့်တည့်ကိုသယ်ယူသွားသလိုခံစားရတယ်။art၎။ သူတို့ကြည့်ရတာဘယ်လောက်တိကျတယ်၊ ဘယ်လိုတည်ဆောက်ထားတယ်ဆိုတာဘယ်လောက်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
အထူးသဖြင့်သေတ္တာကိုဖွင့ ်၍ နံပါတ် ၂၂ အိတ်များကိုရှာဖွေရန်ဤအရွယ်အစားအစုံသည်တခါတရံကြောက်စရာကောင်းသည်ဟုခံစားရနိုင်သည်၊ သို့သော်မည်သည့်အခါကမျှလွှမ်းမိုးခြင်းသို့မဟုတ်အလွန်အကျွံခွန်အားမခံစားရပါ၊ ဤနေရာတွင်တည်ဆောက်ရန်များစွာရှိပါသည်။ Lego ပျော်စရာ မသိသေးသူများပင် ဟယ်ရီပေါ်တာ ဤ set မှတဆင့်သူတို့၏လမ်းကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်artလက်စွဲစာအုပ်တွင်ပါ ၀ င်သောအရာဝတ္ထုတိုင်းနှင့်ပတ်သက်သောအလွန်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်အမာခံသို့မဟုတ်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပရိတ်သတ်တိုင်းအတွက်ဆင်နွှဲထားသည်ဟုခံစားရသည်။
တည်ဆောက်မှုသည် Harry ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပတ် ၀ န်းကျင်မျက်မှန်များတည်ဆောက်ခြင်းဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည်တံဆိပ်အသစ် hoop element ကိုသုံးခြင်းဖြင့်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးထိရောက်သောဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ကတကယ် ၀ တ်လို့ရတဲ့အပိုဆုတွေနဲ့သူတို့ကအရမ်းကြည့်ကောင်းတယ်။ ၎င်းသည်အုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောတစ်စုံကို ၀ တ်ဆင်ခြင်းသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ပျော်ရွှင်စရာအတွေ့အကြုံဖြစ်သည် ဟယ်ရီပေါ်တာ မျက်မှန် - ၎င်းသည်တောက်ပသောထိတွေ့မှုနှင့်တကယ့်ပျော်စရာကောင်းသောစတိုင်ဖြစ်သည့်အတွက်၎င်းကိုလက်ခံပါart အတွေ့အကြုံအတွက်။ အရာဝတ္ထုတစ်ခုစီသည်တူညီစွာထိရောက်မှုရှိပြီးပျော်စရာကောင်းသည်၊ မယုံနိုင်လောက်အောင်လက်တွေ့ကျသည်ကိုမဖော်ပြဘဲ၎င်းသည်တည်ဆောက်မှုအတွက်အသံကိုသတ်မှတ်သည်။
Felix Felicos ၏ကံကောင်းစေသောအရည်ပုလင်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးအမှောင်ထဲတွင်တောက်ပနေသည်၊ Harry ၏ကြိမ်လုံးသည်အလွန် smart လက်ကိုင်မှအဖျားထိတိကျသောပုံသဏ္createန်ကိုဖန်တီးရန်အနည်းငယ်စောင်းနေသောအလွှာများကို သုံး၍ တည်ဆောက်ပါ။ ကြွေပြားများနှင့်ပန်းကန်ပြားများသည်တစ်လျှောက်လုံးတွင် texture ကိုပေါင်းထည့်ပေးပြီး၎င်းကိုအကောင်းဆုံးကိုင်တွယ်သည်။ မင်း Harry ရဲ့မျက်မှန်ဝတ်ထားတာကနည်းနည်းအရူးဆန်တယ်လို့မင်းထင်ရင်စိတ်ကူးယဉ်စာလုံးတွေကိုလှည့်ပတ်ပြီးမင်းလှံတံကိုဝှေ့ယမ်းပြီးစောင့်ပါ။ Lego အသက်အရွယ်အတိုင်းအတာအရကစားနိုင်မှု
အရာဝတ္ထုတစ်ခုစီကိုဘယ်လိုစုစည်းမလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုအများကြီးအသေးစိတ်ကြည့်ရင်မှော်ပညာကိုနည်းနည်းလေးပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်။arts အသုံးပြုမှု (ချောကလက်ဖား၏ခြေဖဝါးများမည်သို့ပေါင်းစပ်လာသည်ကိုလေ့လာကြည့်ပါ) နှင့်ထက်မြက်ပြီးထူးခြားသောနည်းစနစ်များ (ပုလင်းထိပ်ပုံသဏ္creatingန်ဖန်တီးခြင်းသည် p ဖြစ်သည်။articularly sm ပါart).
ဤပုံစံ၏အဓိကစုဝေးမှုမှာမယုံနိုင်စရာအုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော Hedwig ဆောက်ထားသောစာအုပ်များ (စာအုပ်အဖွင့် Tom Riddle ၏ဒိုင်ယာရီအပါအ ၀ င်) စာအုပ်ကြီးများစုပုံတစ်ခုဟုမထင်ပါနှင့်။
စာအုပ်များသည်လှပစွာဆောက်လုပ်ထားပြီးအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဘဝနှင့်တူသည်၊ ဖွင့်ထားသောစာမျက်နှာများအတွက်ကွေးသောတောင်စောင်းများနှင့်အခြားတစ်ခုပေါ်တွင်စုထားသော ၁ × ၄ ပြားများအစီအရီ (အဆင့်များအတွက်တူညီသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ 21045 Trafalgar ရင်ပြင်) စာအုပ်၏ကျန်စာမျက်နှာများကိုကိုယ်စားပြုရန်။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောနည်းစနစ်ဖြစ်ပြီးအချောထည်ပုံစံသို့အလွန်တိကျမှန်ကန်မှုကိုပေးနိုင်သောနည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ စီထားသောစာအုပ်များ၏အဖုံးများသည်စစ်မှန်သည်နှင့်တူညီပြီး2×4နှစ်ထပ်ခုန်သမားများစီးရီးကို အသုံးပြု၍ အောင်မြင်ခဲ့သည်။
စာအုပ်များပေါ်တွင်တည်ထားသောပုံစံသည် Hedwig တစ်ခုလုံး၏ဗဟိုချက်ဖြစ်သည်။ အမွေးများကိုသဘာဝပုံစံများပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်မှာမည်သည့်နည်းနှင့်မျှမလွယ်ကူပါ ဟယ်ရီပေါ်တာ franchise ၏အထင်ရှားဆုံးဇီးကွက်
Hedwig ၏ခြေထောက်များမှအမွေးများကိုအဖြူရောင် pentagonal ကြွေပြားများ၊ အံသွားများနှင့်2×2ပြားများ သုံး၍ လှပစွာပြန်လည်ဖန်တီးထားသည်။ သူမ၏ကွေးညွှတ်သောကိုယ်ကိုညာဘက်နှင့်ဘယ်ဘက် ၂x၃x၈ အနားသပ်များ၊ ၃ × ၁၀ သုံးထပ်သားများနှင့် ၂ × ၆ အစောင်းများ သုံး၍ ပြုလုပ်ထားသည်။ သူမ၏ကြီးမားသောအမြီးအမွေးကိုအပေါက် ၁ ခုပါ ၀ င်သောပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ရပ်တန့်လက်စွပ်နှင့် 1L ဘားကို သုံး၍ ချိတ်ဆက်သောကွေးကောက်တပ်ဆင်ခြင်းနှစ်ခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အမည်းရောင်နှင့်မီးခိုးရောင်အိတ်များထည့်ရန်သုံးသောကြယ်သီးများမဟုတ်သောအပေါ်ဆုံးနည်းစနစ်သည်ဇီးကွက်ကိုတောင်ပံအမွေးတစ်လျှောက်လုံးတွင်သုံးသောချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံအတိုင်းအမြီးကိုပေးသည်။
Hedwig ၏မျက်နှာသည်ယမန်နှစ်ကတွေ့ရှိခဲ့သောအလားတူနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုသည် Brick Sketchesအသေးစိတ်အချက်အလတ်များကိုကွေးပြားများနှင့်အုပ်ကြွပ်များဖြင့်တစ်ထပ်ပြီးတစ်ထပ်ဖြည်းဖြည်းချင်းစီပြီးတစ်ပြိုင်နက်အတိမ်အနက်ကိုအသေးစိတ်ဖန်တီးသည်။ ပုံနှိပ်ထားသော2×2မျက်လုံးများသည်အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းပြီး၎င်းတို့သည်အခန်းတစ်ဝိုက်တွင်သင့်နောက်သို့လိုက်နေသည်ဟုခံစားရသည်။
သင်၏အလွန်မျက်စိရှေ့တွင်ဤအလွန်လက်တွေ့ကျသောဇီးကွက်ပုံသဏ္န်ကိုကြည့်ခြင်းမှာလုံးဝအံ့ဘွယ်ဖြစ်သည်။ အတောင်ပံအမွေးများကိုစုစည်းသောအခါအနည်းငယ်ထပ်ခါတလဲလဲရှိနေသော်လည်း၎င်းသည်အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည် art အချောထည်မော်ဒယ်သည်။ ပုံသွင်းခြင်း၊ အရောင်ခြယ်ခြင်း၊ စကေးနှင့်စစ်မှန်ခြင်းcity အရာအားလုံး၏အာရုံခံစားမှုသာဖြစ်သည်။ ၇၅၉၇၉ Hedwig လျောက်ပတ်သော်လည်း၎င်းသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ ဒါဟာလည်းမှတ်သားရကျိုးနပ်ပါတယ်၊ ဒါကပိုကြီးတဲ့အရာတွေမှာအမြဲတမ်းဖြစ်လေ့မရှိတဲ့အရာပါ Lego အစုံ - ၎င်းသည် ဦး တည်ချက်တိုင်းမှလှပသည်။ ငှက်၏နောက်ကျောသည်ရှေ့ထက် ပို၍ အသေးစိတ်ရှိသည်။
ဤအစုရှိအရာအားလုံးသည်ပြီးပြည့်စုံသည်ဟုအသံကြားရသော်လည်းအုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောအိမ်မှ scarves များကထောက်ပြသင့်သောအနုတ်လက္ခဏာတစ်ခုရှိသည်။ ဤအရာများသည်အစုံတစ်ခုလုံး၏အအားနည်းဆုံးအရာဖြစ်သည်၊ အခြားအရာအားလုံးသည်မည်မျှလက်တွေ့ကျပုံနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အမှန်တကယ်ထူးခြားသည်။ ကျန်အုပ်စုများ၏ဆက်စပ်မှုမှဝေး။ ၎င်းသည်မည်သည်ကိုဆိုလိုသည်ကိုသိရန်ခက်ခက်ခဲခဲဖိအားပေးခံရပြီးအစအဆုံးအတွင်း၌ပင်အနည်းငယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပေ။ Hogw အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အိမ်စောင်တွေကိုအိမ်ထဲကို ၀ င်ဖို့ ၀ မ်းနည်းဖို့ကောင်းတယ်artကျောင်းသားများ၊ သို့သော်၎င်းတို့ကိုအစုံထည့်ပေးသလား။ သူတို့၏ပါဝင်မှုကိုအကြောင်းပြရန်မလုံလောက်ပေ။
မျှမျှတတပြောရလျှင်အနိမ့်ဆုံး p ကိုပြောပါart အုတ်၏ ၃.၀၁၀ p ကိုလက်တစ်ဆုပ်စာသာသုံးသောအုတ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပဝါငယ်တစ်ခုသာဖြစ်သည်arts သည်အလွန်စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသောလုပ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး 76391 Hogw ၏ယေဘုယျအားဖြင့်ဆွဲဆောင်မှုကိုမည်သည့်နည်းနှင့်မျှမယူပါarts Icons စုဆောင်းသူများ၏ထုတ်ဝေမှု အနည်းဆုံးဒီဇိုင်နာများသည်သင်၏ ဦး စားပေးမှုပေါ် မူတည်၍ လုံး ၀ အိမ်သုတ်ပုဝါလေးထည်အတွက်အပိုင်းအစများကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။
စပရ ၀ တ်များသည်အမှန်တကယ်စွဲဆောင်မှုရှိသောစာလုံးပေါင်းသတ်မှုအတွေ့အကြုံကိုပြီးမြောက်ပြီးနောက်ထည့်ရန်နောက်ဆုံးအရာသည်ပုံနှိပ်သည် (၎င်းကိုသင်ပျော်ပျော်နေလျှင်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ Lego) Hogw သို့လက်ခံစာartစုန်းအတတ်နှင့်မှော်ပညာကျောင်း ထိုကဲ့သို့သောမှော်အဆောက်အအုံတည်ဆောက်ရေးခရီးကိုခေါ်ဆောင်သွားပြီးနောက်၎င်းသည်သင်ရရှိခဲ့သည်ဟုကျိန်းသေခံစားရသည် (ထိုစာတွင်ပါ ၀ င်သည် စာလုံးပေါင်းအမှား... ) ။
နှစ် ၂၀ ပြည့်အထိမ်းအမှတ်လှိုင်းများတစ်လျှောက်တွင်ဖြန့်ချိခဲ့ပြီးဖြစ်သည် Lego အဖွဲ့တွင်အထူး (အလွန်စုဆောင်းနိုင်သော) ရွှေ minifigures ခြောက်ခုပါဝင်သည်။ Harry, Ron, Hermione မှ Snape နှင့် Voldemort မှပရိသတ်အကြိုက်ဆုံးအရာအားလုံးကိုသူတို့၏ minifigures များ၏အံ့မခန်းရွှေရောင်ပုံစံများအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
၇၆၃၈၆ Hogwarts Icons စုဆောင်းသူများ၏ထုတ်ဝေမှု (Tom) ပုစ္ဆာကိုဖြေရှင်းပြီးကျွန်ုပ်တို့အားပါမောက္ခ McGonagall, Rubeus Hagrid နှင့်ပါမောက္ခ Dumbledore တို့ကိုပေးသောအရာသည်ခြောက်မှကိုးအထိရွှေအပြည့်အ ၀ ယူသည်။
ပို၍ ကောင်းသည်မှာ၎င်းတို့ကိုပြသရန်အသုံးပြုသောချောကလက်ဖားကတ်အခြေခံဖြစ်သည်။ ဒါကနောက်ထပ် sm ပါart ခရမ်းရောင်ဘောင်ကြီးနှင့်ပတ်ပတ်လည်ကိုထုပ်လုပ်သည်။ မောက်စ်တွင်ပုံနှိပ်ထားသော 'Dumbledore' နှင့် 'ဟယ်ရီပေါ်တာDumbledore ကိုယ်တိုင်အလယ်ဗဟိုကို ဦး ဆောင်ပြီးရှေ့နှင့်အလယ်ဗဟိုရှိ plaques များ၊ သူ၏ Hogw နှစ်ကောင်artလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်တစ်ဖက်တစ်ချက်စီတွင်ရပ်နေကြသည်။
နှစ် ၂၀ ပြည့်အထိမ်းအမှတ်များအားလုံးကို ၀ ယ်ယူနိုင်လောက်အောင်ကံကောင်းသောသူများသည် minifigures ကိုးခုကိုတစ်ပြိုင်နက်ပြသခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည်ဤအစုအတွက်မမျှော်လင့်ဘဲထပ်တိုးသော်လည်း၎င်းသည်ခြုံငုံစွဲဆောင်မှုကို ပို၍ ပင်ပိုစေသောတစ်ခုဖြစ်သည်။
၇၆၃၈၆ Hogwarts Icons စုဆောင်းသူများ၏ထုတ်ဝေမှု ဤမျှကြီးကျယ်ခမ်းနားသော display အပိုင်းအစတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၎င်းသို့သွားရန်ခရီးသည်စျေးနှုန်းသည်အရေးမပါသလောက်အံ့သြဖွယ်အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါကစကေးရဲ့အမြင့်ဆုံးအဆုံးမှာရှိတယ် Lego ထုတ်ကုန်များ၊ ဒါကြောင့်သင်ဟာငွေတန်ဖိုးကောင်းကောင်းရတယ်လို့ခံစားဖို့အရေးကြီးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါကဒါက spades မှာတကယ်ကိုကမ်းလှမ်းတယ်။
အစုံသည်ကြည့်ရန်အလွန်ကောင်းပြီးတည်ဆောက်မှုသည်အလွန်ပျော်စရာကောင်းသည်သာမကထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ရွှေ minifigures သုံးခုလည်းရှိသည်။ သူတို့သည်နောင်လာမည့်နှစ်များတွင်စျေးကွက်တွင်မြင့်မားသောစျေးနှုန်းများပေးလိမ့်မည်မှာသေချာသည်။
အပိုင်း ၃၀၀၀ ကျော်ပါသော set တစ်ခုအတွက်စျေးနှုန်းသည်လက်ရှိစျေးကွက်အတွင်းရှိအခြားအလားတူထုတ်ကုန်များနှင့်သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာရှိသည်ဟုခံစားရသော်လည်း၎င်းသည်တစ်ခေတ်တည်းတွင်ပြီးပြည့်စုံသောအထုပ်ကို ၀ ယ်ရန်၎င်း၏တစ်ခေတ်တည်းထက်ကျော်လွန်သည်။ box တစ်ခု။
ယခုအချိန်တွင်သင်၎င်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပါကကျွန်ုပ်တို့လုံးဝချစ်ပါသည် ၇၆၃၈၆ Hogwarts Icons စုဆောင်းသူများ၏ထုတ်ဝေမှုမရ။ ၎င်းသည်ချက်ချင်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည် ဟယ်ရီပေါ်တာ ပရိသတ်များ၊ လူတိုင်းအတွက်တစ်စုံတစ်ခုကိုအမှန်တကယ်ကမ်းလှမ်းသည်။ လူငယ်ပရိသတ်များသည် props များနှင့်ကစားနိုင်ခြင်းကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်၊ မော်ဒယ်သည်မည်သည့်ပရိတ်သတ်ကြီးများ၏ပြပွဲတွင်မဆိုစင်မြင့်ထက်တွင်နေရာယူလိမ့်မည်မှာသေချာသည်။
ပြောစရာရှိတာကဒီနေရာမှာရှိနေတယ် ၇၆၃၈၆ Hogwarts ရဲတိုက် အကြီးမြတ်ဆုံးအဖြစ် Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ အချိန်အားလုံးသည်ကြီးမားသောတောင်းဆိုချက်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်တစ်ခုဖြစ်သည် ၇၆၃၈၆ Hogwarts Icons စုဆောင်းသူများ၏ထုတ်ဝေမှု သူ့ကိုယ်သူထိုက်တန်ကြောင်းသက်သေပြပြီးပါပြီ။ ၎င်းသည်မည်သည့်နေရာ၌မဆိုမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုအံ့မခန်းကြည့်ကောင်းစေမည့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောမေးရိုးကိုကျဆင်းစေသောအရာဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့သောဘဝပုံစံမျိုးတည်ဆောက်မှုများသည်ကစားရသည့်ပုံစံတွင်များစွာမပါ ၀ င်ပါ၊ သို့သော်ဤအစုသည်ကစားရန်များစွာသောအရာများပါ ၀ င်သည်။
သင်ကဤအရာသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ဟူသောပြောဆိုချက်ကိုသင်ကဲ့ရဲ့ပြောဆိုလျှင် Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ အမြဲသတ်မှတ်ထားတယ်၊ ဒါရိုးရာတစ်ခုမဟုတ်ဘူး Lego playset - ၎င်းသည်လက်လှမ်းမီဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။ ပရိသတ်မဟုတ်သူများ ဟယ်ရီပေါ်တာ တည်ဆောက်မှုမှပျော်ရွှင်မှုတစ်တန်ကိုရရှိလိမ့်မည်၊ နောက်ဆုံးမော်ဒယ်သည်အလွန်လှပသည်၊ အကြောင်းအရာမခွဲခြားဘဲ display ပေါ်တွင်မယုံနိုင်လောက်အောင်ကြည့်ကောင်းသည်။ (ငှက်ကြည့်သူများတစ်ယောက်အတွက်ပျော်ရွှင်လိမ့်မည်။ )
နောက်ဆုံးတွင်ဤ set သည် p ဖြစ်လာသည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေart မင်းရဲ့စုဆောင်းမှုကမင်းအဲဒါကို ၀ ယ်နိုင်လား၊ မပေးနိုင်ဘူးလား၊ တကယ်တမ်းကျတော့မင်းရဲ့ဒေသကိုခေါင်းငုံ့မခံဖို့တခြားအကြောင်းပြချက်မရှိဘူး။ Lego စတိုး ပြီးတော့ Accio ကိုငိုပါ ၇၆၃၈၆ Hogwarts Icons စုဆောင်းသူများ၏ထုတ်ဝေမှု! ' စတင်ထုတ်လုပ်တဲ့အခိုက်အတန့်
သောအလုပ်ကိုထောကျပံ့ Brick Fanatics သင့်ရဲ့ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ပါဘူး Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မဆိုတ ဦး တည်းကိုအသုံးပြုပြီးအစုံ တွဲဖက်လင့်ခ်များ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
LEGO Harry Potter ၇၆၃၉၅ Hogw တည်ဆောက်ရန်မည်မျှကြာမည်နည်းarts Icons Collectors 'Edition?
၇၆၃၈၆ Hogwarts Icons စုဆောင်းသူများ၏ထုတ်ဝေမှု အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိအိတ် ၂၂ ခုပါ ၀ င်သည်။ set အတွင်းပါ ၀ င်သောသေးငယ်သည့်တည်ဆောက်မှုအများစုသည်အလွန်လျင်မြန်စွာစုစည်းလာသော်လည်း Hedwig ၏အဓိကတည်ဆောက်ပုံနှင့်အုတ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောစာအုပ်များမှဖန်သားပြင်ပြသမှုများသည် ပို၍ သေချာသည်။ စုစုပေါင်းပြီးဆုံးရန်ခြောက်နာရီမှရှစ်နာရီခန့်ကြာလိမ့်မည်။
LEGO Harry Potter 76391 Hogw တွင်မည်မျှအပိုင်းအစများရှိသနည်းarts Icons Collectors 'Edition?
၇၆၃၈၆ Hogwarts Icons စုဆောင်းသူများ၏ထုတ်ဝေမှု 3,010 p ပါရှိသည်art၎။ နှိုင်းယှဉ်လျှင်သေးငယ်သည် ၇၅၉၇၉ Hedwig ၆၃၀ သာပါ ၀ င်သည်။
LEGO Harry Potter 76391 Hogw သည်မည်မျှကြီးသနည်းarts Icons Collectors 'Edition?
၇၆၃၈၆ Hogwarts Icons စုဆောင်းသူများ၏ထုတ်ဝေမှု သေးငယ်သောအုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောအရာဝတ္ထုများစွာပါ ၀ င်သည်။ အကွက်တွင်အစအဆုံးနေရာအစုံကိုနေရာချပါ art အတိုင်းအတာသည်အမြင့် ၄၄ စင်တီမီတာ၊ အကျယ် ၅၀ စင်တီမီတာနှင့် ၃၃ စင်တီမီတာနက်ရှိုင်းသည်။
LEGO Harry Potter 76391 Hogw သည်မည်မျှကုန်ကျသနည်းarts Icons Collectors 'Edition ကုန်ကျစရိတ်
၇၆၃၈၆ Hogwarts Icons စုဆောင်းသူများ၏ထုတ်ဝေမှု ၎င်းသည်တိုက်ရိုက်စားသုံးသူအစုံတွင်သာရနိုင်သည် LEGO.com နှင့် Lego ၂၀၂၁ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့တွင်စတင်ဖွင့်လှစ်သောစတိုးဆိုင်များသည်ယူကေတွင်ယူရို ၂၂၉.၉၉၊ အမေရိကန်တွင် ၂၄၉.၉၉ ဒေါ်လာနှင့်ဥရောပ၌ ၂၄၉.၉၉ ဒေါ်လာကျသင့်လိမ့်မည်။
← LEGO Super Mario ကိုခေါင်းစဉ်တပ်သူမပါဘဲသင်ကစားနိုင်သလား။
ဗီဒီယို: LEGO Harry Potter 76391 Hogwarts Icons Collectors 'Edition ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း →
တစ်ခုမှာ "Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ 76391 Hogwarts Icons Collectors 'Edition ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း"
ထိုအပိုင်းအစများသည် Hedwig သို့မည်မျှသွားသနည်း။